‘एपी ब्रान्डको गुणस्तरमा ढुक्क छु’
१७ चैत्र २०७५, आईतवार १०:४७
एपीका उत्पादन शुद्ध छालाबाट बनेका हुन्छन् । यी सामान किफायती, क्यानाडेली डिजाइन हुनु नै यसका प्रमुख विशेषता हुन् ।
समाचार वाचिका श्री पाण्डे हरेक पटक सामान किन्दा एपी ब्रान्डलाई नै रोज्छिन् । गुणस्तरीय, हेर्दा आकर्षक र टिकाउ भएकै कारण उनको रोजाइमा एपी ब्रान्डका सामान परेको हो । नेपालमा जबदेखि एपी ब्रान्ड भित्रियो, त्यसबेलादेखि उनी एपीको नियमित ग्राहक हुन् । उनीसँग क्यापटिल नेपालले गरेको कुराकानी :
नेपालमा यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड छन्, । तर, पनि तपाईंले एपी ब्रान्ड नै किन रोज्नुभयो ?
हेर्दा आकर्षक, अन्य ब्रान्डको तुलनामा गुणस्तरीय तथा सस्तो हुनु नै मेरो रोजाइमा एपी पर्न सफल भएको हो । शरीर सुहाउँदो फेसनेवल सामग्री एपी फुटवेयर तथा एसेसरिजले बेच्ने गरेको छ । त्यसैका कारण पनि म एपी ब्रान्डको नियमित ग्राहक हुँ ।
एपी ब्रान्डको गुणस्तरमा कसरी विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मैले धेरै समयदेखि एपी ब्रान्डका विभिन्न सामान प्रयोग गरिरहेकी छु । एपी नेपालमा भित्रिनुभन्दा पहिला अन्य धेरै ब्रान्डका सामान प्रयोग गरेकी थिएँ । ती धेरै गुणस्तरीय लागेनन् । तर, अहिले म ढुक्क छु ।
अन्य ग्राहकलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
नेपालका धेरै ठाउँमा ब्रान्डेड भनेर ननब्रान्डेड सामान बेच्ने गरेको पाइन्छ । उपभोक्तालाई ब्रान्डेडका नाममा भुक्याउने काम भएको छ । त्यसैले साँच्चिकै ब्रान्डेड सामान बेच्ने एपी ब्रान्डलाई नै रोज्नुस् । ताकि गुणस्तरमा कम्प्रमाइज गर्न नपरोस् ।
यस्तो छ नेपालमा एपी फुटवेयरको इतिहास
एपी फुटवेयर कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रहेको आरपी ग्रुपले गत फेब्रुअरीबाट नेपालमा एपी ब्रान्डका फुटवेयर र एसेसरिजहरु बिक्री गर्न सुरु गरेको हो । ग्रुपले अहिले जावलाखेलबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
ग्रुपले महिला र पुरुषका लागि विभिन्न फुटवेयर र एसेसरिज ब्यागमा फ्लोरल, ह्यान्ड क्राफ्टेड ब्याग, ल्यापटप ब्याग, ट्रली सुटकेस, पर्स, पासपोर्ट कजेज, की–चेन पाउज, कार्ड होल्डर, महिला पुरुषका लागि जुत्ता, स्यान्डल, फर्मल तथा क्याजुअल दुवै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
एपीका उत्पादन शुद्ध छालाबाट बनेका हुन्छन् । यी सामान किफायती, क्यानाडेली डिजाइन हुनु नै यसका प्रमुख विशेषता हुन् । सम्पूर्ण वस्तुको सर्भिस वारेन्टी पनि दिने कम्पनीले बताएको छ ।
मदरल्याण्ड स्कुलले मनायाे २७ अाैं वार्षिकाेत्सव
पाइप आयो, पेट्रोल पाइपलाइनको शिलान्यास कहिले ? (पाइप फोटो फिचर)
सरकारको दबाबपछि तेल लिन भारत गए ट्याङ्कर चालक